कोरियामा दुई नेपालीको मृत्यु :: Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Audio, Video, Nepali Model, Actor, Actores, Interview
कोरियामा दुई नेपालीको मृत्यु अशोक मैनाली
६ फागुन, सौल । दक्षिण कोरियामा दुई नेपालीको मृत्यु भएको छ । सौल स्थित नेपाली दूतावासको अनुसार ४ महिना अघि भ्रमण भिषामा आएका भैरहवाका ३६ बर्षका श्याम कुमार गैरे आफु सुतैकै कोठामा मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । कोरियाको गङ्नाम स्थित हानान्सीमा स्थित कम्पनीकै कोठामा उनी मृत भेटीएका थिए । उनको मृत्युकको कारण ह्र्द्यघात भएको प्रहरीले बताएको छ।
त्यस्तै कोरियाकै छ्नान् आन्सानमा झापा बिर्तामोडका राजेशकुमार राईको म्यानमारको नागरिको आक्रमणबाट मृत्युक भएको बताईेको छ। समाजसेवी नवराज भट्रराईका अनुसार ईपीएस मार्फत ११ महिना अघि कोरिया आएका ३५ बर्षिया राईलाई सामान्य बिवादका क्रममा भएको आक्रमणबाट ज्यान गएको हे । यस बिषयमा सौल स्थित नेपाली दूतावासले घटनाबारे थप बुझिरहेको कोरियाका लागी नेपाली राजादूत कमान सिङ् लामाले बताउनुभएको छ।
6 Comments on “कोरियामा दुई नेपालीको मृत्यु”
With Love From Desert wrote on 17 February, 2013, 6:46
Neplai dajoovai harooko mrityu ko ghatana le hami sabai lai marmahat banayeko chha…Yasma chhanbin gari doshi paaiyeko khandama tyasta byakti haroolai sighra bhanda shigra karbahi garna anurodh gardachhu….saathi hardik samabedana prakat garna chahanchhu…
mero bhasha wrote on 17 February, 2013, 6:53
shiva wrote on 17 February, 2013, 8:04
gopal limbu wrote on 17 February, 2013, 8:37
Ghatnako bastabikta bujhi dosimathi kanun mutabik karbai gariyos
राजु सन्तोषी थापा wrote on 18 February, 2013, 13:53
समचार सुन्दा साह्रै दुख लागो छनान आसान क्षेत्रस्थित साम्बुटेक कम्पनीमा कार्यरत झापा अनारमनी-८ का राजेश राईको शनिबार सोही कम्पनीमा कार्यरत कम्बोडियाका कामदारले सामान्य बिबादमा धारिलो चक्कुले हत्या गरेका हुन् र हाम्रो झापा मिलन समाज कमिटि लगायत अन्य साथीहरु घटनास्थल,आसान प्रहरी चौकी र अन्त्यमा हान्गुक अस्पताल पुगेर लाशको अवलोकन गरि १ बजे रति आइपुगेका हौ येत्रो घटना हुदापनि राजतुतावास लगायत कुनै पनि संघ संस्थाको उपस्थिती नदेखिएतापनि कमसेक सूचना सत्य तथ्य दिनुपर्ने होइन र ?
Like or Dislike:20[जवाफ फर्काउनुहोस्]deuman Reply: February 19th, 2013 at 8:55 pmSantosh g tapai haru nai hunu hudo rahexa tyaha. Wastabikata ko praman tesaile doshi mathi karbahiko. Lagi aba tapai haru nai jagaruk hunuparne bhayeko xa tesaile aawaj buland garnus
सामाजिक कार्यमा यतिद्धारा साढे १६ लाख सहयोग प्रदान